Nisy ny mpanabe tsy nametraka olana tamin’ireo ankizy tsy nisotro, nisy ny sekoly nasain’ny mpizara nody avy hatrany ny mpianatra, toy ny tetsy amin’ny LMA Ampefiloha ny alarobia teo izay am-polony mahery no nandà fa hoe tsy mahazaka tambavy. Nitaraina tamin’ny mpanabe ny sasany, saingy tsy maintsy mitondra taratasy fanamarinana na “certificat médical” vao miverina mianatra. Raha miverina amin’ny fanazavan’ny Tale Jeneralin’ny IMRA, dia mila fankatoavana sy fenekena an-tsitrapo. Alefa tsikelikely dia hampitomboina amin'ny maha TEST azy. Misy ny tsy mametraka olana ny ray aman-drenin’ny mpianatra, fa tao ihany koa ny ray aman-dreny misafidy ny tsy handefa mihitsy ny zanany hianatra noho ny fandavana ilay tambavy, ary tena misy maneho fa aleony very taona iray ny zanany. Tokony halalaka ny tsirairay na hisotro na tsia, fa tsy hafangaro sy atao takalon’aina amin’izany ny fianarana izay zo fototra. Raha ny lalàmpanorenana, dia ambaran’ny andininy faha-8 fa tsy misy olona azo ampahoriana, saziana na ampijaliana amin’ny fomba tafahoatra sy tsy mendrika manetry ny maha-olombelona. Voarara indrindra ny manery olona iray hanaovana andrana ara-pitsaboana na ara-tsiansa raha tsy nahazoana ny fanekeny malalaka izany, izany hoe tsy an-tery . Ao anatin’ny hamehana anefa isika, ka mety sokajian’ny mpitondra ho takon’izany ny lalàmpanorenana. Sady tsy momba no tsy manohitra, fa raha toa ka misy ny tsy resy lahatra dia malalaka sy zon’ny fanjakana ny mamolavola fomba sy paikady vaovao mafonja kokoa hoenti-mandresy lahatra. Efa nampidirina tao an-tsain’ny olona anefa ny hoe: tsy maintsy, izay efa fanerena. Samy manana ny heveriny fa rariny sy hitsiny sy ny marina aminy rahateo na ny mpomba na ny tsy mpomba ny fisotroana sy fampisotroana azy io, ka tokony halalaka ny safidin’ny tsirairay izay tsy misy omen-tsiny na ny andaniny na ny ankilany.